နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: တနင်္ဂနွေရဲ့ ကျိုင်းတုံအာလူးထမင်းချဉ်
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:02 PM
ဂလုခနဲ မြည်အောင်ကို မျိုချပစ်လိုက်ပါသည်...
ကျိုင်းတုံလုပ်ပါဗျ ခေါင်းစဉ်က.. ဘာများလဲဆိုပြီး ပြေးလာတာ ချော်တောင်လဲတယ်.. (အစားဆို သားသားကအဲ့လိုပဲစ်စ် :P)
ငါးမုန့်ကြော်ပုံမှာ လက်ကြီးထွက်နေတာ ဘူဒူလဲဗျို့..
ထမင်းချဉ်ကိုတော့ စားဖူးတယ်.. အရမ်းကြိုက်စ်ပဲ..
အောက်က ရှောက်သီးသုပ်တို့၊ သရက်သီးသုပ်တို့ .. ဒံပေါက်... ဂလု..း(
khin oo may February 8, 2009 at 4:27 PM
My Blog February 8, 2009 at 5:16 PM
အစားမျိုးစုံနှင့် ကြွားနေသော ကိုဘသို့
ဒီတခေါက်တော့ မနှေး အမြန် ပြေးလာပါသည်.. ဒါတောင် ခြေမြန်တော် အရင်ရောက်သူများ ရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒီ အာလူးထမင်းနယ်မျိုး စားဖူးတယ်။ မာလာဟင်းတော့ မစားဖူးသေးပါ။ အခုမှ မြင်ဖူးတာ။ သရက်သီးသုပ်လည်း ငမ်းသွားတယ်။ ခါကြက်ဥဒိန်ချဉ် ဆိုတာလည်း အခုမှ ကြားဖူးတယ်။ အခုမှ အိပ်ရာထလို့ ဗိုက်ဆာနေတာ...
Unknown February 8, 2009 at 6:49 PM
ထမင်းမကြိုက်ဘူး စပါး ကြိုက်တယ်
ကျိုင်းတုံကဆို စပါး ကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျာ
Ko Boyz February 8, 2009 at 6:55 PM
မနေ့ညက စပါး ပါလာတယ်လေ...။ (ကျိုင်းတုံက ဧည့်သည်ညီလေးတွေ သယ်လာတာတဲ့...။)
ဘာဘီကျူးပစ်ရဲ့ ၁၀း၀၀ နာရီ တည့်တည့်မှာ...။ ကျွန်တော်တောင် ၀င်နွဲလိုက်သေးတယ်...။ ဆရာသမား ပုဇွန်ကင်နေတာနဲ့ ပွဲတော်ကြီးနဲ့တောင် လွဲသွားတယ် ထင်ပါ့...။
MrDBA February 8, 2009 at 7:22 PM
စားကောင်းမယ့်ပုံဘဲနော် ... (ပုံတွေကြည့်၍ လက်မှိုင်ချကာ ပြန်သွားသည်)
JuneOne February 8, 2009 at 8:57 PM
8 Feb 09, 17:08
ုkom: ပြိုင်ဖက်ပေါါ်နေပြီူ juneone
ksanchaung February 8, 2009 at 9:14 PM
ငတ်ပြတ်နေပါတယ်ဆိုမှ ဒင်းတို့ကလည်း အစားသောက်တွေအကြောင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောပြီးကို ရန်စနေတော့တာပဲ။ (လူဇိုးတွေ၊ လူဇိုး)
Ko Boyz February 8, 2009 at 10:21 PM
အဲလို ဖြစ်သွားစေမယ်လို့ မရည်ရွယ်ပါဘူးဂျာ... ပရိသတ်ကြီးရယ်...။ စားမိတာလေးတွေကို ပြန်ပြောပြချင်ရုံ သက်သက်ပါ...။
khin oo may February 8, 2009 at 10:45 PM
တို့က juneone (http://juneone-juneone.blogspot.com/) ကိုသွားသတင်းပေးတယ်။ juneone ချက်တာလေးတွေ ကလည်းစားချင်စရာ.. ကိုဘ ကလည်းစားစရာတွေ တင်တော့ juneone ရေ..မင်းမတော့ပြှိုင်ဘက်ပေါါ်နေပြီ..မင်းပြိုင်ဘက်ကတော့မင်းထက် လက်ရည်သာတဲ့သဘောရှိတယ်. သူ့စားစရာတွေက အတော်မိုက်တယ် လို့သွားသတင်းပေးပါတယ်။
8 Feb 09, 17:07
အဲဒီတော့ juneone က လိုက်လာပြီး ကိုဘ စားစရာတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ မှန်ပါတယ်။ သူ့ချက်ထားတာတွေက ကိုဘ ရဲ့ စားစရာတွေ ကို မမှီပါဘူး. ကိုဘ ရဲ့စားစရာတွေ ကသာလျှင် ပိုကောင်းပါတယ် လို့ဆိုပြီး အရှူံးပေးသွားတာပါ.
February 8, 2009 8:57 PM
juneone: anr Boyz:အရှုံးပေးလိုက်ပြီ
(ဘေ့စစ် နည်းတယ် လို့ ဆိုတော့လည်း မခံချင်ဘူး.)
Ko Boyz February 8, 2009 at 11:05 PM
အဲလို ဆြာဂျီး လုပ်ပြီး သူများကိုပြောလိုက်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာတယ် မဟုတ်လား...။
အစက မပြောလား... ခုနှစ်ရက် သားသမီးကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပါတယ်ဆိုတာ...။ သူက မယုံဘူး...။
khin oo may February 8, 2009 at 11:08 PM
အင်း..ခံလိုက်ရပြန်ပြီ.. ကိုယ်ကတော့သူတကယ်မသိဘူးထင်ပြီး အချိန်တွေ အကုန်ခံလိုက်ရတာ.. ဆြာဂျီးလုပ်တာမဟုတ်..စေတနာနဲု့ လဲ..
ငါကိုယ်က မှားပါတယ်လေ.သူ..ဆရာကြီး...ဆိုတာ သိရက်သားနဲ့။
khin oo may February 8, 2009 at 11:09 PM
ပုံတွေ အကြီးချဲ့ကြည့်ပြီး ပညာယူပါတယ်။
N2 ကို သတိရတယ်။ သူလဲသရက်သီးတွေ ကြိုက်တယ်။
ရနံသစ်ဆိုတာ အပေ့ါ်ထပ်က မြန်မာဆိုင်တွေ ထဲက တစ်ဆိုင်ထင်လို့ အခုမှ သတိရတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာ..။
မာလာဟင်းကတော့ တကယ်ကို မစားဘူးဘူး.တသက်လုံး..။ အခုတလောမှ ဘဲကြားဘူး မြင်ဘူးပါတော့တယ။်
ခင်မင်းဇော် February 8, 2009 at 11:12 PM
ကိုယ်တိုင်ချက်တာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ ..
khin oo may February 8, 2009 at 11:16 PM
Ko Boyz February 8, 2009 at 11:19 PM
အစ်မ ခင်မင်းဇော်ရေ့... အိမ်က ဟင်းတွေကတော့ ပါးစပ်နဲ့ ချက်တယ်...။ နောင်တော်ကြီးက လုပ်ပေးတယ်...။ အပြင်ဆိုင်ကတော့ ဆိုင်က ၀န်ထမ်းတွေကို ကိုယ်စားချင်တာ ချက်ခိုင်းလိုက်တယ်...။ :D
အန်တီဂွိ - နေ့လည်က ပင်နီစူလားက ရှမ်းတောင်တန်း စတိုးဆိုင် (ရဲရင့် လက်ဘက်ရည်ဆိုင် နားက)မှာ ရယ်ဒီမိတ် မာလာဟင်း အခြောက်ထုပ် တွေ့ခဲ့တယ်။ အခြေခံ အဆာပလာတွေ ပါတယ်။ (ကျောက်ပွင့်၊ အသားတု၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲ အကြည်၊ ဂျုံပြား၊ စသဖြင့်ပေါ့လေ)။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာသာ ထည့်ပါလေ...။ ကျွန်တော်ကတော့ ကန်စွန်းရွက် နဲ့ မုန်ညင်းဖြူ နိုင်နိုင်ထည့်ပြီး နူးအိနေအောင် ပြုတ်တယ်။ ပူပူစပ်စပ်နဲ့ဆိုတော့ ၀ါးစရာ မလိုပဲ တစ်ခါတည်း မျိုချလို့ ရတယ်လေ...။
ksanchaung February 8, 2009 at 11:30 PM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ တစ်ညလုံး ဘလော့ဂ်ထဲ အလေလိုက်။ နေဖင်ထိုးမှ အိပ်ရာထပြီး သူများချက်သမျှကို အားမနာတမ်း အလှူလိုစားတဲ့ သူတွေရဲ့ပုံကို မြင်ယောင်မိသေး။
အဲဒီ အစားအသောက် ပို့စ်တိုင်းမှာပါတဲ့ နောင်တော်ကြီးကိုတော့ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမယ့် အတော်လေးစားမိသဗျာ။ (နောင်တော်ကြီးရေ။ ခင်ဗျားလည်း မင်းသားကြီး ကိုမဆလာလိုပဲ မကြာခင် နာမည်ကြီးတော့မယ်။ သတိသာထား။)
Ko Boyz February 8, 2009 at 11:47 PM
နောင်တော်ကြီးက အစ်ကိုအရင်းပါ။ ဒါ့ကြောင့် လက်ဆေးပြီး ထစားရုံပဲ။ (လာဖတ်မိရင်တော့ တေဘီပဲ...။ ဟိ)
Ko Boyz February 8, 2009 at 11:58 PM
တစ်ခါတစ်လေလဲ ကျွန်တော် အိမ်မှာ ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ...။ ခင်ညားတို့ကလဲ အနော့်ဆို အကောင်းမပြောကြပါလား...။
နောက်ဆို ချက်မိတိုင်း လက်ဖျံနားက ချစ်မွေးနဲ့ ချစ်မှည့်လေး မပါပါအောင် ထည့်ရိုက်ပြမယ်...။
khin oo may February 9, 2009 at 12:56 AM
khin oo may February 9, 2009 at 1:24 AM
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ကူးပေါက်လို့လာရေးတဲ့ကွန်မက်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိ ပါကြောင်း.
အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင်တော့ အဆိုတော်နာမည်မှားသွားတာ.(ထုံးစံ အတိုင်း ) ဂျေညီညီ လား..ဂျေမောင်မောင်လား..စီးကရက်ကိုသောက်တတ်ရင် ဆေးလိပ် မီးခိုးမွန် တာ လောက် တော့ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ ခံနိုင်ရည်ဆို တဲ့ စကားလုံး ကလေးက နေဆက်ပြီး စိတ်ထဲကနေ သီချင်းဆက် ဆိုတာ အဆိုက လည်း မရ..အတီးကလည်း မလည်. စာသားကလည်းမေ့။ အဆိုတေ်ာ နာမည်လည်းမှား..အဲလိုဖြစ်သွားတာပါ။
သိချင်းစာသားလေးရသေးရင် ဆိုပြပါ.နားထောင်ချင်လို့။ You tube မှာ MP3 မှာ တွေုရင်လဲ link ပေးပါ။ ကျေူးဇူး.
:P February 9, 2009 at 9:37 AM
Ko Boyz February 9, 2009 at 9:49 AM
ဲအန်တီဂွိ - အဲဒီသီချင်းအတွက် ဆော့စ်ဖိုင်တွေ့ရင် ပြောပြပါ့မယ်။ ကော်မန့်မှာတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပို့စ်နဲ့ ပါတ်သက်တာလေးကိုပဲ ရေးမိချင်လို့ပါ။ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင် စိတ်ကွက်မှာလဲ စိုးရသေး...။ အဟက်။ တားတော့ လာရေးချင်တာရေး စိတ်မဆိုးဘူး။ လာဖတ်ဖေါ်ရလို့ ၀မ်းသာတယ်။
ဆင်ဆင် - နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူရင် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ပြောစရာ မရှိပါ။ သဘောရှ ကရောဟိနိုင်ပါကြောင်း...။
khin oo may February 9, 2009 at 12:51 PM
ဂျေညီညီသီချင်းရပါပြီ။ mm ပေးတယ်။
May Moe February 9, 2009 at 1:35 PM
Summer Field February 9, 2009 at 2:06 PM
အင်း.. ချဉ်ရည်ဟင်းရည်၊ သရက်သီးသုပ်နဲ့ ရှောက်သီးသုပ်ကို ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် များများဆမ်းထားတဲ့ ထမင်းချဉ်နဲ့ အားပါးတရစားအပြီးမှာ မန်ကျည်းဖျော်ရည်နဲ့ ခါကြက်ဥဒိန်ချဉ်ကို အစာပိတ်လိုက်တဲ့အခါ..(ဒန်တန်တန်..)အမလေးဗျ..လုပ်ကြပါအုံး..ပိတ်လို့မရတော့ဘူး..
Dr. Yi Yi Win February 11, 2009 at 9:06 AM
ကဘ ကရှမ်းအမျိုးသားလားဟင်။ စားစရာတွေကတော့ရှယ်ပဲဗျို့ ။
Ko Boyz February 11, 2009 at 9:30 AM
ဝေး.. ရှမ်းကြီး... နင်ကာ့ ဘာလူမျိုးလဲ ဝေး....။ :D